ရာထူးဖော်ပြချက် - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
IWCA ရာထူးဖော်ပြချက်များသည် IWCA ဘုတ်အဖွဲ့မှစစ်ဆေးပြီးအဖွဲ့ ၀ င်များကအတည်ပြုထားသောရာထူးများကိုဖော်ပြသည်။ အနေအထားကြေညာချက်ကိုဖန်တီးခြင်းအတွက်လက်ရှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတွေ့နိုင်ပါသည် IWCA နည်းဥပဒေများ:
a. ရာထူးဖော်ပြချက်၏ function ကို။ IWCA ၏အနေအထားထုတ်ပြန်ချက်များသည်အဖွဲ့အစည်း၏ကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးများကိုအတည်ပြုပြီးရှုပ်ထွေးသောကမ္ဘာအရေးအသားစင်တာများနှင့်စာအရေးအသားစင်တာလေ့လာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလက်ရှိပြonနာများကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။
b. လုပ်ငန်းစဉ်ရည်ရွယ်ချက်။ IWCA အနေအထားထုတ်ပြန်ချက်သည်တသမတ်တည်းရှိပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
c. အဘယ်သူသည်အဆိုပြုနိုင်ပါတယ်ဖြေ - ရာထူးထုတ်ပြန်ချက်အတွက်အဆိုပြုလွှာကိုဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုသည့်ကော်မတီသို့မဟုတ် IWCA အဖွဲ့ဝင်များမှရရှိနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, အနေအထားထုတ်ပြန်ချက်များအများသဘောတူညီမှုတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပူးပေါင်းချဉ်းကပ်မှုတို့ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အနေအထားဖော်ပြချက်တွင်အဖွဲ့အစည်း၏မတူကွဲပြားမှုကိုကိုယ်စားပြုသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီမှလက်မှတ်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။
d. ရာထူးဖော်ပြချက်အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ: ရာထူးကြေညာချက်က
e. တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြေ - အဆိုပြုထားတဲ့အနေအထားကိုထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများကော်မတီသို့အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့နိုင်ပါတယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် IWCA ဘုတ်အဖွဲ့သို့တင်ပြချက်မတိုင်မီမူကြမ်းများစွာလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
f. အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်- ရာထူးထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အမိန့်များကော်မတီမှဘုတ်အဖွဲ့သို့တင်ပြပြီးမဲအများစုကိုအတည်ပြုပေးရမည်။ ဘုတ်အဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်ရာထူးကြေငြာချက်ကိုအများစု၏ထောက်ခံမဲ ၂/၃ ဖြင့်အတည်ပြုရန်အဖွဲ့ဝင်များသို့တင်ပြလိမ့်မည်။
g: ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်သည်။ ။ ရာထူးထုတ်ပြန်ချက်များသည်လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်၊ ဘုတ်အဖွဲ့မှသင့်လျော်သည်ဟုယူဆသည့်အတိုင်းရာထူးဖော်ပြချက်များကိုအနည်းဆုံးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်၊ ပြင်ဆင်၊ သို့မဟုတ်မော်ကွန်းတင်မည်။ မော်ကွန်းတင်ထားသောထုတ်ပြန်ချက်များကို IWCA ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဆက်လက်ရရှိနိုင်သည်။ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်သက်ဆိုင်သူများနှင့်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ရှုထောင့်များပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
h: ပို့စ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။ ဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုပြီးပါကရာထူးဖော်ပြချက်ကို IWCA ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့ကို IWCA ဂျာနယ်များတွင်လည်းထုတ်ဝေနိုင်သည်။
လက်ရှိ IWCA ရာထူးဖော်ပြချက်နှင့်သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ
2001: IWCA ၏ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားစာအရေးအသားစင်တာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ချက်
2006: မတူကွဲပြားခြင်း Initiative
2007: နှစ်နှစ်ကောလိပ်စာအရေးအသားစင်တာများအတွက် IWCA ရာထူးဖော်ပြချက် [၂၀၁၅ တွင်မွမ်းမံခဲ့သည်]
2010: လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆန့်ကျင်ရေးနှင့်ဘာသာစကားဆိုင်ရာသည်းမခံမှု
2015: IWCA ၏အလယ်တန်းကျောင်းအရေးအသားစင်တာများအတွက်ရာထူး
2018: “ သူတို့” ၏တစ်မူထူးသောအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ IWCA ၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်